Kugadzirisa ruzha nekongiri pombi rori hydraulic hurongwa? - China Qingdao CO-NELE Group
Kugadzirisa ruzha nekongiri pombi rori hydraulic hurongwa?
I. Small pombi rori fuertes kubva plunger pombi kana motokari
(1) kubvisa chinoshamisa mumwe kukonzera kunyanya Mheremhere hydraulic pombi. Kana mhepo yakavhenganiswa kupinda mafuta, zviri nyore kuti chimiro cavitation wayo mukuru kumanikidzwa nzvimbo uye kuparadzira muchimiro kufurirwa mafungu, zvichiita mafuta kusvikira oscillate uye mhaka cavitation ruzha munyika. Huru Zvikonzero ndiwo:
① The mafuta Sefa pamusoro hydraulic pombi duku pombi rori, ari blockage mafuta Inlet mutopota, kana mafuta viscosity hahusvikirwi, anogona Vacuum panguva pombi Inlet kukwirira, vachibvumira mhepo dawo.
② The duku mafuta pombi hydraulic Pombi uye mutyairi pombi mugodhi magumo mafuta chisimbiso wakaremara, kana mafuta nenyere haasi tsime chisimbiso, zvichiita mhepo kupinda.
Apo mukuru ruzha rikaitika chesamende pombi rori hydraulic pombi, pamusoro apa nhengo dzinofanira kutanga achiongorora, uye matambudziko zvinofanira kugadziriswa nenguva.
(3) The hydraulic pombi Kuparadzirwa bwendefa duku kongiri pombi Rori iri mumwe zvinokosha zvinoriumba kuti havatani kukonzera ruzha. Nokuda pamusoro kusakara kana sludge deposits pamukova kuti vachidzikisa tangi panguva kushandiswa, kuparadzira ndiro achaita kupfupisa kuti vachidzikisa tangi uye agoshandura vachidzikisa chinzvimbo, zvichiguma mumisungo mafuta, iyo achaita ruzha yepamusorosoro. In inowanzotorwa kugadzirwa kwacho, kuparadzira ndiro rakagadzirwa nevanhu sandara nokugeda vachavawo zvakakonzerwa vachigurisira ari vachidzikisa paburi. Panguva ino, kana isina zvakanaka mazhinji nguva, zvichava zvakare vaunze yakawanda ruzha. Munguva gungano kwacho, yakakura vachidzikisa paburi iri kuparadzirwa ndiro inofanira kuiswa pamatunhu-nevezera mukamuri pombi, uye ayo unopinza angled kunge chakatarisana Kutenderera inoenda humburumbira, zvikasadaro zvahuchaunza ruzha rukuru negadziriro .
Nomubvumo rokuyamura vharuvhu
The duku pombi rori rokuyamura vharafu asingatani yakakwirira kakawanda ruzha, iyo kazhinji kunokonzerwa kusagadzikana chokupika mutyairi vharuvhu, kureva, ruzha kunokonzerwa nemupristi kakawanda oscillation kwokudzvinyirira pamberi mhango pakati mutyairi vharuvhu. Huru Zvikonzero ndiwo:
Air yakavhenganiswa mumafuta, uye cavitation achiumbwa pamberi mhango pakati mutyairi vharuvhu, izvo chinoita mukuru-Frequency ruzha. Panguva ino, pedza mhepo munguva uye kudzivirira kunze mhepo kubva apiwa pavanopinda.
(2) The tsono vharafu anowanzoonekwa kumbopfeka nokuda kakawanda kuvhurika panguva kushandiswa, izvo zvinoita cône pose tsono vharuvhu uye vharuvhu chigaro vasingakwanisi kunyatsotevera kuonana nomumwe.
(3) The mutyairi wendege vharafu wacho kumanikidzwa ndangariro basa iri kusagadzikana nokuda kuneta deformation remvura, izvo chinoita guru kumanikidzwa nokufamba uye anoita ruzha. Panguva ino, tsime anofanira kutsiviwa.
Chechitatu, nomubvumo duku pombi rori hydraulic humburumbira
(1) Air yakavhenganiswa mumafuta kana mhepo iri hydraulic humburumbira haina simba chose, uye cavitation kunoitika pasi kuitwa mukuru kumanikidzwa, izvo chinoita ruzha guru. Panyaya iyi, vanonetesa mhepo nenguva.
(2) The humburumbira mafuta musoro chisimbiso iri vakabatisisa kana pisitoni shamhu ndeyokubvisa, uye zvichaita uyewo vaunze ruzha nokuda mamwe mauto munguva kufamba. Muchiitiko chino, unofanira kutsiva mafuta mucherechedzo kana ruramisa kuti pisitoni tsvimbo nenguva.
Chechina, Mapaipi ruzha
Kunwisa Bends mudenga pombi nyere kana vakasununguka kutara clip kunogonawo vaunze vibration uye ruzha. Saka, akafa Bends kunofanira kudziviswa kure sezvinobvira ari Mapaipi marongerwo, uye akasunungura okusungisa zvinofanira akasungirirwa nenguva.
Post nguva: Mar-26-2020